Ịdọ aka ná ntị ahụike Canada: Ihe nhicha aka adịghị mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ịdọ aka ná ntị ahụike Canada: Ihe nhicha aka adịghị mma
Health Canada na-adụ ndị Canada ọdụ na a na-echetara ndị na-asachapụ aka ndị a n'ihi na ha nwere ike nwee ihe egwu ahụike.
Health Canada na-edobe ndepụta ihe nchacha aka a nwere ike ibute ihe egwu ahụike, ka ndị Canada wee nwee ike ịmata ngwa ahịa ha zụtara ma mee ihe kwesịrị ekwesị. A na-agba ndị Canada ume ka ha na-elele ya mgbe niile maka mmelite.
Product Ihe ize ndụ ahụike Company NPN ma ọ bụ
DIN Nọmba Lot Ụbọchị mmebi Emere ihe
CN Pharma 80%
nke CN Pharma; ShieldPlex Ngwaahịa abụghị
nyere ikike ka
Group Inc. 80098091 dc2005np001 db042120 dc2005np002 db42120 Eprel 2023 Eprel 2023 Eprel 2023 Eprel 2023 Echetara ngwaahịa
site na ụlọ ọrụ
ọkwa dị elu Mmụọ Nkume 80098012 20121 20122 20128 20156 20160 Eprel 2022 Mee 2022 Mee 2022 Juun 2022 Juun 2022 Echetara ngwaahịa